HomePod wuxuu yimaadaa isla marka uu suuqu bilaabmo inuu uumi qaado, sida lagu sheegay daraasad | Waxaan ka socdaa mac
HomePod waxay timaaddaa uun sida suuqyadu u bilaabaan inay uumi qaadaan, daraasadda ayaa heshay
Javier Porcar | | Noticias, dhowr
Waxaan ka baranay Hindisaha Apple ee suuq geyntiisa afhayeenkiisa iyadoo la dhisayo Siri, shirkii ugu dambeeyay ee horumariyaha, ee la qabtay Juun 2017. Xagaaga kadib, shirkaddu waxay ku dhawaaqday in siideynteeda suuqa ay dib u dhaceyso, maadaama ay horumarineysay afhayeenka shirkadda iyo sida ku cad boggeeda internetka, waxaan arki doonnaa afhayeenka Apple bilaha ugu horreeya ee 2018, ugu yaraan Mareykanka.
Dood badan ayaa dhalisay dib u dhaca HomePod, iyo in Apple uu ku daahay suuqan afhayeenka. Waa hagaag daraasad ayaa shaaca ka qaadday in Apple ay imaan doonto waqtiga saxda ah, dhererka suuqa.
Sida ku xusan daraasadda, 2018 waxaa laga yaabaa inuu yahay sannadka kuwa ku hadla caqliga iyo astaamo gaar ah, sida HomePod. Daraasada waxaa soo saaray NPR iyo Edison Research, Waxay muujineysaa shaqooyinka kale in lixdii qof ee Mareykan ah mid ka mid ah uu leeyahay ku hadla caqli badan, laakiin tiradaani waxay kordhay 128% marka loo eego bishii Janaayo 2017.
Hogaamiyaha suuqa Mareykanka waa Amazon Echo oo leh 11%. Marka xiga waxaan leenahay Hoyga Google, oo leh 4% wadaag. Kirismaskan, Tobankiiba hal muwaadin ayaa iibsaday sameecado. Jaantuskan, kuwa cusbooneysiinaya sameecadooda ama iibsanaya sameecado labaad ayaa guuleysta. In kasta oo kuwa iibsada af-hayeenka Apple markii ugu horreysay iyaguna muhiim yihiin.
Iibsadayaashu waxay iibsadaan afhayeen iyaga ka siiya wax ka badan uun qalabka ay sida caadiga ah muusigga ka ciyaaraan. Taasi waxay ka siinaysaa iyaga waxyaalo badan waxayna ku mashquulinayaan qoyska iyo asxaabta hortooda. Isla mar ahaantaana, Daraasadu waxay muujineysaa in 44% ka mid ah kuwa iibsaday afhayeenka caqliga badan, ay sii isticmaalaan Siri tan iyo markaas.
Sidaa darteed, wax waliba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Apple ay timaado waqtiga saxda ah: dadku waxay bilaabayaan inay ogaadaan faa iidooyinka aftahanimada caqliga leh iyo daahfurkooda waxaa lala wadaagayaa kuwa ugu dhow. Xitaa sidaas, Waxaan joognaa daqiiqad bilow ah, oo Apple wuxuu u maleynayaa in kuwa ku biiraya waqtigan, ay heli karaan natiijooyin wanaagsan: badankood malaha afhayeen caqli badan, tanina waa suuq aad u weyn oo u baahan kara afhayeenka caqliga badan sanadaha soo socda.
Wax la mid ah ayaa ka dhacay Apple Watch, halkaas oo in badan oo ka mid ah Apple daahay. Sannado ka dib ayaa la muujiyay in saacadda Apple ay tahay midka ugu iibinta badan Smartwatch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » HomePod waxay timaaddaa uun sida suuqyadu u bilaabaan inay uumi qaadaan, daraasadda ayaa heshay
Ogeysiisyada garaaca wadnaha ee Apple Watch ayaa shaqeynaya oo lagu muujiyaa ciyaaraha NFL
Soo qaado iMac Pro oo leh $ 1.000 off